? Instagram ပေါ်က Whatsapp၊ Facebook တွေ ပျက်နေပြီလား? | Androidsis
WhatsApp၊ Facebook နှင့် Instagram တို့ပြိုလဲသွားသည်
နာရီအနည်းငယ်အဘို့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် WhatsApp၊ Facebook နှင့် Instagram ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ပလက်ဖောင်းသုံးခု၏ဆာဗာများအားလုံးကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စနစ်တွင်သိမ်းဆည်းထားကြောင်းသတိရသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ထဲမှတစ်စုံတစ်ယောက်သည်နည်းပညာပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရပါကထိုဆုံးရှုံးမှုများသည် ၀ န်ဆောင်မှုသုံးခုကိုတစ်ချိန်တည်းအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
အ Whatsapp, Facebook နှင့် Instagram တို့တွင်ပြonနာများအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ၎င်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ onပြီ ၁၄ ရက်၊ ၁၂း၀၀ နာရီတွင်စတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤစနစ်များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်ပြproblemsနာများရှိပါက၎င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်နှင့်ပြproblemနာမဟုတ်ဘဲကုမ္ပဏီ၏ပြproblemနာဖြစ်သည်။
WhatsApp သည်ယခင်ကအလားတူပြproblemsနာများကြုံခဲ့ရပြီးနှစ်စဉ်ကျဆင်းမှုများစွာသည်သုံးစွဲသူများအကြားအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့ဤကိရိယာပေါ်တွင်မည်သည့်အဆင့်အထိမှီခိုနေသည်ကိုပြသသည်။ ဤအချိန်နှင့်ယခင်ကွာခြားချက်များမှာကွာခြားချက်မှာယခုအချိန်အထိ WhatsApp စနစ်၏ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည် တစ်ကိုယ်တော် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဤကိရိယာကိုလက်လှမ်းမမီဘဲထားခဲ့ပြီးယခုအခါ၎င်းသည်လူများ၏အဓိကဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုလည်းသက်ရောက်စေသည်။ Facebook နှင့် Instagram တို့ဖြစ်သည်။
ကြေးနန်း 4.91 - နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တိုးတက်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသိပေးချက်များ
ပြengineနာကိုဖြေရှင်းရန်ကုမ္ပဏီအင်ဂျင်နီယာများအနေနှင့်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ငြင်းခုံမှုများဖွင့်လှစ်ထားသနည်း ကျနော်တို့မှီခိုဖြစ်လာကြပါပြီ ဒီကိရိယာအမျိုးအစားများ၊ နာရီများစွာကျဆင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Whatsapp » WhatsApp၊ Facebook နှင့် Instagram တို့ပြိုလဲသွားသည်
သင်၏ Galaxy S10 ကိုဤနောက်ခံပုံများဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ
Snapdragon 665 နှင့် 730 သည် AnTuTu ကိုဖြတ်သန်းသည်